आधा दर्जनबढि स्थानमा पहिरो खस्दा फिदिम–फालोट सडक अवरुद्ध « Mechipost.com
आधा दर्जनबढि स्थानमा पहिरो खस्दा फिदिम–फालोट सडक अवरुद्ध
प्रकाशित मिति: १३ भाद्र २०७८, आईतवार ०९:३०
निरन्तरको वर्षाका कारण विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन सडकमा पहिरो झरेको छ भने एक स्थानमा सडकको पूरा भाग नै बगेको छ । फिदिम–फालोट सडकअन्तर्गत फालेलुङ गाउँपालिका–८ आकाशे आसपासमा मात्रै तीन ठाउँ–ठाउँमा पहिरो झरेको छ । यस स्थानमा १५ दिन दिनयता सडक अवरुद्ध बनेको छ । “बाटो सफा ग¥यो, एकैछिनमा पहिरो खसेर पुर्छ”, फालेलुङ गाउँपालिका वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष शेरबहादुर केरुङले भन्नुभयो, “पानी निरन्तर परिरहेकाले पहिरो झरिरहेको छ ।” केरुङका अनुसार वर्षा कम भएको अवस्थामा समेत फालेलुङ–७ विहीदिनसम्म सडक सुचारु गर्न अझै केही दिन लाग्छ ।
फालेलुङ गाउँपालिका वडा नं. ७ र ८ को वीचमा धेरै स्थानमा पहिरो झरेको छ । जसमध्ये लिखुरे र लोक्से भन्ने स्थानमा झरेको पहिरो पन्छाउन सके विहीदिनसम्म सवारी सुचारु हुन्छ । पहिरो झरेको लिखुरे र लोक्सेका बीचमा पाँच वटा गाडी फसेर एक सातादेखि रोकिएको वडाध्यक्ष केरुङले जानकारी दिनुभयो । “दुई दिन लगाएर धेरै पहिरो पन्छाइएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “शुक्रवार पुनः पहिरो झरेकाले समस्या भएको छ ।” प्रशस्तै पानी भएको यस क्षेत्रमा सामान्य वर्षा हुनेवित्तिकै सडकमा भेल बग्ने गर्छ । यो सडक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले भित्तापट्टि कटान गरिएका अधिकांश स्थानमा पहिरो झरेको स्थानीयवासीको भनाई छ ।
फालेलुङ–७ विहीदिनमा सिदिन स्वास्थ्य चौकी छेउमा फिदिम–फालोट सडक पहिराले बगाएको छ । विहीदिनसम्म सडक सुचारु भए वैकल्पिक माध्यमबाट फालेलुङका अन्य वडासम्म सवारी पुग्न सक्दछ । “स्वास्थ्य चौकी छेउमा भित्ताबाटै छिनेर सडक बगेको छ । ग्रावेल गरिसकेको बाटो पहिरोले तानेकाले ठूलो क्षति भयो”, वडाध्यक्ष केरुङले भन्नुभयो, “यहि स्थानमा पानीको मुल निस्केर बगिरहेको अवस्था छ । विद्युतको पोल पनि ढलेको छ ।
झरी नरोकिएसम्म काम गर्न कठिन छ ।” यहाँ पहिरो गई सडक अवरुद्ध भएको तीन साता वितिसकेपनि यहाँसम्म सडक सुचारु हुँदा वैकल्पिक माध्यमबाट फालेलुङ–५ प्राङबुङ लगायत ठाउँसम्म सवारी पुग्दथे ।
यहि सडकले फालेलुङ–६ ओगेम्बालाई पनि जोडेको छ । अहिले ओगेम्बामा भने फिदिम नगरपालिका–१२ पुलभञ्ज्याङबाट वैकल्पिक सडकको माध्यमबाट सवारी पुग्ने गरेका छन् । फिदिम–फालोट सडक फालेलुङ–६ का विभिन्न स्थानमा समेत क्षतिग्रस्त बनेको छ । फालेलुङ–६ का राजकुमार राईका अनुसार यहाँको इम्सावाको वेतेनी भन्ने स्थानमा ठूलो पहिरो झरेको छ भने मधेवा खोला छेउमा अर्को पहिरो झरेको छ ।
“गाडी नचलेको १० दिन बढी भयो”, राईले भन्नुभयो, “स–साना पहिरो त गनिसाध्य छैनन् ।” कालोपत्रेका लागि विस्तारका क्रममा रहेको फिदिम–फालोट सडक अत्यधिक वर्षाका कारण धेरै स्थानमा क्षतिग्रस्त बनेको हो । यो सडक फिदिम नगरपालिका वडा नं. १, ११ तथा १२ का विभिन्न स्थानमा समेत पटक–पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
सडक अवरुद्ध भएको र निरन्तरको वर्षा भइरहेकाले गाउँमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुने अवस्था आउन लागेको वडाध्यक्ष केरुङको भनाई छ । “पहिरो झरिरहेकाले पन्छाएर सडक सुचारु गर्न समस्या भएको छ”, केरुङले भन्नुभयो, “सामग्री खरिद गर्न, विरामीहरुलाई अस्पताल लैजान समस्या भएको छ ।”